Huawei သည်မည်သည့်သတင်းကို MWC 2019 တွင်တင်ဆက်မည်နည်း Androidsis
Huawei မှ MWC 2019 အတွက်ဘာမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
အက်ဒါဖာရီနို | | Huawei, UHI
MWC 2019 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်တရားဝင်စတင်မည် နှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 28 သည်အထိကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံသဏ္takingာန်ပြောင်းလဲလာပြီးအမှတ်တံဆိပ်တော်တော်များများဟာဘာစီလိုနာမှာသူတို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုပြီးပါပြီ။ ဒီတော့ဝေး, အမှတ်တံဆိပ်ကြိုက်တယ် LG, သရုပ်ြပ o Nokia သည်ထိုဖြစ်ရပ်တွင်၎င်းတို့၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် Xiaomi ကကျွန်မတို့ကိုသတင်းတွေထားပေးတော့မယ် ဒီဖြစ်ရပ်အတွက်။ ထို့အပြင် Huawei သည်ဘာစီလိုနာတွင်၎င်းတို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Huawei ကဲ့သို့သောဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်ကိုစောင့်စရာမလိုပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မတိုင်ခင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့မှာသူတို့ကဒီနှစ်အတွက်သူတို့ရဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူနိုင်တဲ့တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တွေစီစဉ်ပေးတယ်။
ရက်သတ္တပတ်စုံတွဲတစ်တွဲ Huawei သည် MWC 2019 တွင်၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကစီစဉ်နေသည် ဖေဖော်ဝါရီလ 24 ရက်နေ့တွင်တင်ဆက်မှုဖြစ်ရပ်ပြီးသားပိုစတာမှတဆင့်ကြေညာခဲ့သည်အတိုင်း။ ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သောတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုအဖြစ်အပျက်ကိုယခုလအကုန်တွင်မျှော်လင့်ရမည့်တင်ဆက်မှုများမှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
များစွာသောရှိသည်သောသံသယ ဒီပွဲမှာ Huawei ကနေကျွန်တော်တို့တကယ်မျှော်လင့်နိုင်တာပါပဲ။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အထဲတွင်၎င်း၏တည်ရှိမှုအတည်ပြုခဲ့သည်သိရသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတယ်လီဖုန်းပွဲတွင်မည်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုသင်တင်ဆက်မည်နည်း။ ဤအချက်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဘာမျှော်လင့်ရမည်ကိုသိရန်အထောက်အကူပြုသောအချက်အလက်အချို့ရှိပြီးဖြစ်သည်။
3 MWC 2019 ၌သတင်းများ?
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ကွန်ယက်များတွင်ရှိနေခြင်းကိုကြေငြာသောတင်ပိုစတာတွင်ယင်းကိုဆိုလိုသည် ကျနော်တို့ကခေါက်စမတ်ဖုန်းမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပုံတွင်မြင်ကွင်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အလင်းရောင်ရှိခြင်းကိုမြင်နိုင်သည့်အပြင်၎င်းသည်ကွေးနေသောလမ်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ Huawei သည် 5G အထောက်အပံ့ရှိသည့်ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေကြောင်းလပေါင်းများစွာကသိခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ခုခု ဒါဟာပြီးသားပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ ဒီဖုန်း၏ပထမဆုံးပြန်ဆိုမှုများပေါက်ကြားခဲ့သည်။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကသုံးမယ့်စနစ်ရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုရနိုင်တယ်။ သံသယမရှိဘဲ, ကတစ်ခုဖြစ်သည် ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်ခေါ်စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ရပ်အတွက်, စျေးကွက်အတွက်ဒီနှစ်အကြီးအခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ် ဦး အပြင် အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများ.
5G သည်ဤကိရိယာ၏အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huawei သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ 5G ကွန်ယက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အသုံးချမှုတို့တွင်အများဆုံးပါဝင်သောအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ယခုအချိန်အထိဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပြenနာများစွာကြုံတွေ့နေရသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်ကဒီလိုက်ဖက်မှုရှိဖို့ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
ပွဲတော်မှာ Huawei တင်ဆက်မည့်တစ်ခုတည်းသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မီဒီယာအမျိုးမျိုးကဖော်ပြသည်မှာတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်စမတ်ဖုန်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဤပွဲကိုလာလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာ MWC 2019 ကိုအပြင်းအထန်ကတိကဝတ်ပြုထားတယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။ ယူရို ၁၅ သန်းခန့်သည်၎င်း၏ကြီးမားသောရပ်တည်မှုနှင့်ကြော်ငြာအတွက်သုံးစွဲခဲ့သည် ဘာစီလိုနာအတွက်ဖြစ်ရပ်၏ရှေ့ဆက်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီကနေအများကြီးမျှော်လင့်ထား။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီလတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြproblemsနာတွေကြောင့်ပုံရိပ်ဟာတိုးတက်လာတယ်။
ကျန် Huawei ၏ MWC 2019 တွင်တင်ဆက်မည့်ကျန်မော်ဒယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမသိသေးပါ။ အချို့သောမီဒီယာများကဤအဆင့်မြင့်တင်ဆက်မှုကိုပြသသော်လည်း P30 နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုသိနိုင်ကြောင်းထောက်ပြခဲ့သည် ချီတက်ပွဲအတွက်ရာအရပျကိုသွားသွားသည်ထိုသို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါငါတို့အများကြီးမြင်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်ပေမယ့် အချို့သောရှေ့ပြေးပုံစံအဖြစ်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းစမတ်ဖုန်း။ ဒါကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဒီနှစ်အတွက်သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ချင်တယ်။
ဒီစမတ်ဖုန်းတော်တော်များများမှာ 5G ဟာသာမန်ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်။ ယခုနှစ်အစတွင် Huawei တင်ပြခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်ပါ အသစ် 5G modem, သေချာပေါက်ကိရိယာများတွင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒီပွဲမှာတင်ဆက်မယ့်ဒီမော်ဒယ်အသစ်တွေမှာနာမည်တွေမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စမတ်ဖုန်းအမြောက်အမြားကိုမျှော်လင့်နိုင်သော်လည်း 5G သည်အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပစ္စည်းတွေဟာအလယ်အလတ်တန်းစားနဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားပရမီဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။
MWC 2019 ၌သတင်းများ?
ဤသည်ကြီးမြတ်မသိတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Huawei တွင်ပွဲတစ်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ပါက Honor မှအသစ်သောအရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ MWC ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ဤကိစ္စသည်အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ။ ဥပမာ, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဘာစီလိုနာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပွဲ၌ဂုဏ်ပြုမှုမခံခဲ့ရပါ။ သူသည်သူ၏ရှိနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှယခုအချိန်အထိ 2019 ဖြစ်ရပ်တွင်မတွေ့ရပါ
ထို့အပြင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့ MWC 2019 တွင် ၄ င်း၏တည်ရှိမှုကိုကြေငြာခြင်းသို့မဟုတ်ဖောင်းပွမှုပြုလုပ်ရန်မရှာရသေးပါ။ ထို့ကြောင့်တရားဝင်အတည်ပြုချက်မရှိခြင်း၊ ကျနော်တို့သတင်းရှိသည်သွားကြသည်သောခံစားချက်မပေးပါဘူး အဖြစ်အပျက်မှာဂုဏ်ပြုခြင်းအားဖြင့်။ ဤကိစ္စတွင် Huawei ကိုအာရုံစိုက်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei မှ MWC 2019 အတွက်ဘာမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
Xiaomi Mi9တွင် Google Assistant ခလုတ်ရှိသည်
ARCHOS အသစ်စိန် - ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာဖြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ်